Pyae Phyo (MMiTD): ♪ ဖုန်းတစ်ခုလုံးကိုပေါ့ပါးသွက်လက်အောင်ရှင်းလင်းပေးမယ့် - Clean Master Phone Boost Android V5.16.1 build 51616800 (March-6) ♫
♪ ဖုန်းတစ်ခုလုံးကိုပေါ့ပါးသွက်လက်အောင်ရှင်းလင်းပေးမယ့် - Clean Master Phone Boost Android V5.16.1 build 51616800 (March-6) ♫
Android Phone တစ်ခုလုံးရဲ့ System ပိုင်းတွေကို အကောင်းဆုံးရှင်းလင်းပေးနိုင်မယ့် Clean Master (Boost & AppLock) V5.16.1 နောက်ဆုံးထွက် Version လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Task killer တွေထဲမှာ ဒီကောင်လေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့Top Application တွေထဲမှာ အခု Apk ပါတယ်။ အခု Cleaner လေးကိုဆောင်ထားကတည်းက စက်ကပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲဗျာ။ ဒီကောင်လေးမှာ Function9မျိုးပါ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စက်တွေထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့ Junk ဖိုင်တွေ အကုန်လုံး အသေးစိပ် ရှာပြီး ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက်စက်ကို လုံးဝပေါ့သွားစေ ပါတယ်။ App တစ်ခုကို uninstall လုပ်လိုက်ပြီ ဆိုရင် စက်ထဲမှာ အဲ့ဒီဖျက်လိုက်တဲ့ App နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဖိုင်တွေ ပျက်သွားပြီလို့ ထင်နေရင် တော့မှားသွားမယ်။ အဲ့ဒီလို ကျန်ခဲ့တဲ့ အမှိုက်တွေ Junk ဖိုင်တွေကိုလည်း ဖျက် ပေးပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ ဖိုင်တွေကို တော့ လုံးဝဖျက်ပေး မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Task killer ကိုလည်း လုံးဝ ထိထိရောက်ရောက်ကို kill ပေးနိုင်ပါတယ်။ သုံးကြည့်ပါ အပြောနဲ့လက်တွေ့ ယုံသွားစေရမယ်။ ဒါ့အပြင်လုပ်ဆောင်ချက်အသေးစိတ်ကိုအောက်မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါ တယ်ဗျာ။
Cleans junk, residual and cache files to free up storage. Boosts speed and improve the performance of your phone. Keep your phone clean and fast with Clean Master.
Blocks and cleans junk notifications. Stops trash notifications from jamming your phone.
Keeps your phone safe and secure with Clean Master's free antivirus engine (ranked #1 by AV-TEST)! Scans the system for pre-installed and user-installed apps to keep your device safe from viruses, Trojans, malware, vulnerabilities, adware and spyware. Protect your privacy with Clean Master.
Cools down phone's temperature and reduces CPU usage by stopping overheating apps. And extend battery life!
Analyzes battery status and hibernates running apps to save power, extend your battery life with 1-tap using Battery Saver.